budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၃ (ဇာတ်သိမ်း) – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in shared information and tagged co-operative, Development, Dilemma, Expectation, individualism, Life, Prayer, strength. Bookmark the permalink.
← budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၂
Even if … →
9 thoughts on “budget စတေးရှောင်ခြင်း – ၃ (ဇာတ်သိမ်း)”
MrDBA | June 17, 2009 at 9:21 pm
ဆိုတော့ အခုအလုပ်က နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာမှ ရသွားတာလား။ မျက်စိလည်အောင် မလုပ်နဲ့နော်။ အလုပ်ရကြောင်း မရေးတော့ မျက်စိလည်သွားပြီ။
kom | June 17, 2009 at 10:33 pm
အခုဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေလည်းဆိုတာ ကို ရှာဖွေတူးဖော်လိုက်ရတာ တော်တော်များများဖတ်ပြီးသွားတယ။် ဟူး………………
ကုမ်ရာသီသူ | June 17, 2009 at 11:29 pm
မမကွမ်၊ ကိုကြီး ဒီဘီ>> အနော်သုံးခဲ့တဲ့ စတေးရှောင်နည်း နိဿရည်းကိုပဲ ရေးတာလေ။ အလုပ်ရတာက နောက်တစ်ခေါက်မှာမှ ရတာ။ အလုပ်ရှာနေစဉ် ကြုံတဲ့ ပွဲစားပေါင်းစုံလည်း နည်းဘူးပဲ။ စိတ်ရှည်ရှည် ဖတ်ပေးသွားကြတာ ကျေးဇူး အထူးပါ ခင်ဗျာ။
နွေးနေခြည် | June 18, 2009 at 1:52 pm
ဖတ်ရင်း အသက်ရှုမိရဲ့လားတောင် မသိတော့ဘူး။
MrDBA | June 19, 2009 at 7:23 am
ဟင် … အဲဒါဆို ပိုက်ပိုက်တော်တော် ကုန်ခဲ့မှာဘဲနော်။ လွယ်ပါဘူး။
ကုမ်ရာသီသူ | June 19, 2009 at 9:58 am
ကိုကြီးဒီဘီ>> ထင်လို့ပါ။ စလုံးကနေ ဂျိုဟိုးကို နှစ်ခေါက်ရှောင်တာ စုစုပေါင်း စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၁၂၀ ပဲ ကုန်ပါတယ်။ (နေ/စား အားလုံးက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကပ္ပိယဆိုတော့ စားရိတ် အင်မတန် ငြိမ်းပါတယ်။) စလုံးမှာ နေစဉ်က အင်တာဗျူးအတွက် သွားခဲ့တဲ့ MRT နဲ့ ဖုန်းခကသာ အများနည်းတူ ကုန်တာပါ။ ထို့ကြောင့် ၃ လကျော်ကျော် အလုပ်ရှာစဉ် စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၁၀၀ လောက်ထွက်သွားပါတယ်။ ပွဲစားအပ်မှာထက်စာရင်တော့ အများကြီး တွက်ချေကိုက်ပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့လည်း ၄၀% ပိုနီးစပ်သွားတာပေါ့။
ကုမ်ရာသီသူ | June 19, 2009 at 1:28 pm
နွေးနေခြည်>> အဲဒီတုန်းကတော့ အသက်ရှူမိတယ် ထင်ပါတယ်။ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ခုတော့လည်း ……. ဒီလိုပါပဲ။
nyimuyar | June 22, 2009 at 12:00 am
so exciting to read
ကုမ်ရာသီသူ | June 23, 2009 at 12:55 am
Nyi Mu Yar >> I’m shame for myself, being so ‘me-oriented’ while others like “may nyane” didn’t emphasize their sufferings as much as I did. They actually are really inspiring people for me.